သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတာ ဒကာ ဒကာမတွေ အားလုံးပဲ သိကြပါတယ်၊ သီတင်းကျွတ်တာသည် ဒကာ ဒကာမတို့ ဘာဖြစ်လို့ ကျွတ်ပါလိမ့်မလဲလို့ မေးတဲ့အခါကျတော့ သီတင်းကျွတ်တယ်ဆိုတာ လ၏ အထိမ်း အမှတ်သာဖြစ်တယ်။
ဒကာ ဒကာမတွေ၌ ဘယ်လိုများ ၀မ်းသာစရာပဲလား၊ အလုပ်မပြည့်စုံသေးလို့ရှိရင် ၀မ်းနည်းစရာပဲ လားလို့ မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဒကာကြွယ်တို့ ဦးလှဘူးတို့ မောင်ဘသော်တို့ မှတ်စရာက သြော် … သေခါနီး ဖြစ်သွားတာဟေ့ … (မှန်လှပါဘုရား)။
သီတင်းကျွတ်တာ ဘာပါလိမ့် … (သေခါနီးဖြစ်သွားတာပါဘုရား) သေသေချာချာပါ ဒကာ ဒကာမတွေ သီတင်းကျွတ်တာ ဒကာ ဒကာမတွေကလည်း မီးတွေ ထွန်းကြလို့ ဆရာသမားတွေ ကန်တော့ ရလို့ ၀မ်းသာလှတယ် ဆိုတာတော့ ကန်တော့တဲ့ စေတနာတွေကတော့ ၀မ်းသာရတာ အမှန်ပါပဲ … (မှန်ပါ့)
သိုသော် ခန္ဓာကတော့ သီတင်းမကျွတ်ခင် ၀ါဆိုဦးကပင် ခုသေဖို့ရာ နီးသွားတယ်။ (မှန်ပါ့) ဒကာကြွယ် သေဖို့ရာ နီးသွားတယ် … (နီးပါတယ်ဘုရား)။
အဲတော့ သေဖို့ရာ နီးသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဒကာ ဒကာမတို့ မသေရာ ရှာဖို့ရာ အလုပ်ဟာလဲ ခရီးရောက်ထားဖို့ အရေးကြီးတယ် … (မှန်လှပါ)။
လူတိုင်းဟာလည်း အတိတ်က ဆုတောင်းကြောင့် အတိတ်က အ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရတွေ ကျုပ်တို့က မကျော်လွှားနိုင်တာနဲ့ ယခု ၀ိညာဏ်၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာဆိုတဲ့ ဒုတိယအကွက် ရောက်ပြီးသကာလ နေတော့ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏကလည်း လာရတော့မှာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ထိုကဲ့သို့ လာရငြားသော်လည်းတဲ့၊ ဒီတစ်ခါသာ ဆုတောင်းမှား၊ အလုပ်မှားကြောင့်၊ သစ္စာမသိလို့ မှားခဲ့သောကြောင့် သေပွဲဝင်မဟ။
မသေရာရှာတဲ့ အလုပ်ကိုဖြင့် အထမြောက်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို သီတင်းကျွတ်သွား တာသည်ကားလို့ ဆိုရင်သေခါနီး ဖြစ်ငြားသော်လည်း၊ မသေရာရှာတဲ့ အလုပ်ကိုဖြင့် သိရလို့လည်း ၀မ်းသာ … (မှန်လှပါ)။
အထမြောက်လို့လည်း ၀မ်းသာကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ သတိပေးလိုက်တယ် … (မှန်ပါ့)။
သြော် … ဘုန်းကြီး ဒကာ ဒကာမတွေ ဒါဖြင့် မသေရာကို ဒုတိယဘ၀ရောက်တော့မှာလားဆိုတော့၊ သစ္စာသိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့် သစ္စာက ဒုက္ခသစ္စာ၊ သိတာက မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်လေသောကြောင့် ဒီ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူး။
မဂ္ဂသစ္စာက မသေရာသာ တွေ့တယ် … (မှန်ပါ့) မဂ္ဂသစ္စာက … (မသေရာသာ တွေကပါတယ် ဘုရား)။
အဲတော့ စကားတစ်လုံး ဆရာဘုန်းကြီးက သစ္စာတွေချည့်ပဲပြောနေတော့ သစ္စာသိပါပြီ သစ္စာက ဒုက္ခသစ္စာ (မှန်လှပါ)၊ သိတာက … (မဂ္ဂသစ္စာပါဘုရား)။
အဲတော့ မဂ္ဂသစ္စာက ၀မ်းထဲရောက်ပြီးသကာလ နေတော့ သြော် … အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့ သေရာသွားတာပဲ … (မှန်ပါ့)။
ဒို့ကတော့ဖြင့် မသေရာ အထမြောက်နေပြီလို့ ၀မ်းသာလိုက်စမ်းပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။ မသေရာ အထမြောက်နေပြီလို့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေက ၀မ်းသာလိုက်ပါ … (မှန်ပါ့)။
သစ္စာသိပြီးရင် ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ … (မှန်ပါ့)၊ သစ္စာမသိလို့ ငါဘုရား သံသရာရှည်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း၊ သစ္စာသိတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကျတော့ အဲဒီသိတဲ့ဥာဏ်က ဒကာ ဒကာမတွေသိတာက သာမည သိတာမှ မဟုတ်ပဲ။
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ဒုက္ခသစ္စာ၊ ခဏ ခဏ ဖြစ်ပျက်နေတာလည်း ဒုက္ခသစ္စာ၊ ဟိုဘေးဒီဘေးမြင်၊ အိုအေး၊ နာဘေး သေဘေးတွေက နှိပ်စက်နေတာ ဒုက္ခသစ္စာ၊ နေပူလေပူတွေက နှိပ်စက်နေတာ ဒုက္ခသစ္စာ။
ကိလေသာတွေက နှိပ်စက်လို့ ခန္ဓာကြီးက ခံနေရဘာလည်း ဒုက္ခသစ္စာ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဤကဲ့သို့ သစ္စာသိတဲ့ဥာဏ်နဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ သေတော့ကို သုဂတိမှတစ်ပါး ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ .. (မှန်လှပါဘုရား)။
သုဂတိမှတစ်ပါး … (ဘယ်မှမရောက်ပါဘုရား)၊ ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဆိုတာဖြင့် စကားတစ်လုံး နာရတဲ့အတွက်တဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ အားပေးစကား ပြောတယ်လို့ မယူပဲနနဲ့ အမှန်စကား ပြောတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အားပေးစကားက တစ်မျိုးပါနော် … (မှန်လှပါ) အမှန်စကားက တစ်မျိုးပါ … (မှန်လှပါ)။
ဒါကြောင့် အမှန်ပြောတဲ့ စကားဖြစ်လေသောကြောင့်၊ တရားဖြစ်လေသောကြောင့် ဒကာကြွယ် သေရမှာဘာမှ မကြောက်နဲ့ … (မှန်လှပါဘုရား)။
သေခါနားနီးတာအမှန်ပဲ … (မှန်လှပါဘုရား) နီးပင်နီးငြားသော်လည်း သစ္စာသိပြီးမှ သေရလို့ရှိရင် ဖြင့်တဲ့ ဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
သစ္စာသိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ ဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ် (မှန်လှပါဘုရား) ဖြစ်ပျက်က ဒုက္ခသစ္စာပဲ … (မှန်လှပါ)၊ ဝေဒနာရှုလို့ ဝေဒနာဖြစ်ပျက်ဟာ ဒုက္ခသစ္စာ … (မှန်လှပါ)။
စိတ်ရှုလို့ စိတ်ဖြစ်ပျက်ဟာ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ အင်း အဲဒီလို ဒုက္ခသစ္စာတွေ ရှုတဲ့အခါမှာ မြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သစ္စာသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ မှတ်လိုက် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဖြစ်ပျက်သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ (ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရား)။ သစ္စာသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ မောင်ဘသော် ဦးလှဘူးတို့၊ ဒကာကြွယ်တို့ မှတ်စရာပေါ့ဗျာ … (မှန်ပါ့)။
အဲ … ဒါဖြင့် သိတော့ သိပြီဘုရား၊ ခပ်ရေးရေးတော့ဖြင့် တပည့်တော်တို့ ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာမဂ်နဲ့တကွ မပယ်နိုင်သေးဘူး ခဏသာ ပယ်နိုင်သေးတယ်ဆိုပြီး သကာလ ၀မ်းမနည်းလိုက်ပါနဲ့ (မှန်လှပါဘုရား)။
သစ္စာ သိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် သုဂတိသို့ ရောက်ပါလိမ့်မယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။ သုဂတိသို့ ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ နတ်သမီးရင်ခွင်ထဲမှာ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ထိုင်လျှက်ကလေးသွားဖြစ်တယ် … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
ရင်ခွင်ထဲမှာ၊ ၀မ်းထဲမှာ မဟုတ်ဘူးနော် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရင်ခွင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျှက်ကလေးသွား ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ သစ္စာသိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်က ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေ လေသောကြောင့် နတ်ပြည်ရောက်ရင် ငါနတ်သမီး၏ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေပါပေါ့လားဆိုတာက မသိသေး ဘူးတဲ့ … (မှန်လှပါ)။
သြော် … ဒီခန္ဓာကြီးဟာ ဒုက္ခသစ္စာ အစုကြီးပါလားဆိုတဲ့ ဥာဏ်က အရင်ပေါ်လာတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဥာဏ်က အရင်ပေါ်လာတယ် … (ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား)။
နတ်ပြည်ရောက်တာက မသိသေးဘူးတဲ့ … (မှန်လှပါ)၊ ဒကာ ဒကာမတွေ ဥာဏ်က အရင် ပေါ်လာတယ် (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒီခန္ဓာ ဘာသစ္စာလို့ ပေါ်လာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာလုိ့ ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား) ဒုက္ခသစ္စာလို့ ပေါ်လာ သောကြောင့် နတ်ပြည်ရောက်တာ မသိခင် သစ္စာကို အရင်သိတဲ့အတွက် ဒီထဲမှာပဲ ဒကာကြွယ် သောတာပန်တည်တာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဟ! မြန်လှချည်လားလို့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေက မေးလို့ရှိရင်ဖြင့် သစ္စာသိထားတာက လူ့ပြည်က ဆရာဘုန်းကြီး အကူအညီနဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ၏ ဥာဏ်၏ စွမ်းရည် သတ္တိနဲ့ အကူအညီနဲ့ ဥာဏ်စွမ်းရည် သတ္တိနဲ့ နှစ်ယောက်သိထား ကြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
နှစ်ဖက်သိထားတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဆရာကလည်းပြော ဒကာ ဒကာမတွေကလည်း သိလိုက်တော့ ဖြစ်ပျက်ဘာ သစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဟုတ်သားပဲ ဖြစ်ဒုက္ခ၊ ပျက်ဒုက္ခပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘာတဲ့ … (ဖြစ်ဒုက္ခ, ပျက်ဒုက္ခပါဘုရား)။ ဖြစ်ဒုက္ခ ပျက်ဒုက္ခပဲဆိုတာ ဒကာ ဒကာမတွေက သိပြီးသကာလနေတော့ …
ကိုင်း ကံမကောင်း အကြောင်းမသင့်လို့ ကံကုန်သွားတယ်လို့ မောင်ဘသော်ဆိုလိုက် … (မှန်လှပါ ဘုရား)။
သိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ ဒကာကြွယ်တို့ ဦးလှဘူးတို့ သုဂတိနဲ့ နတ်ရင်ခွင်ထဲ သွားရောက်ပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ရောက်သည်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်း နတ်ပြည်ရောက်မှန်းမသိဘူး … (မှန်လှပါဘုရား) သူ့ခန္ဓာ ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဟာ! … ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့ ချက်ချင်း ဥာဏ်ထဲ ထင်လာတယ် … (မှန်လှပါ ဘုရား)။
ထင်တော့ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောချင်၊ ဥာဏ်က ဦးစီးပြီးသကာလ လာသောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ သောတာပန် နတ်သား၊ သောတာပန် နတ်သမီး ဖြစ်ပါတယ်၊ (မှန်လှပါဘုရား)။
အားငယ်စရာများ ရှိသေးလား … (မရှိပါဘူးဘုရား)။ အဲဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ သစ္စာဖြင့် မသိသိအောင် လုပ်ပါဆိုတာ ဆရာဘုန်းကြီးက အမိအဘ ဆွေမျိုးညာတကာ ညီအကို မောင်နှမဆိုတာ မတော်ဖူးသည် မည်သည်မရှိလို့ …
ဘုရားကလည်း ဟောထားပါတယ် ဒကာ ဒကာမတို့ ရင်ခွင်ထဲရောက်တော့ ရင်ခွင်ထဲရောက်တဲ့ နတ်သား နတ်သမီးလေးဟာလေ သူတို့မှာ သိစေဆိုတဲ့ တရားကလည်း သိစေဆိုတဲ့ ၀မ်းထဲမှာ ပိတ္တံ = သည်းခြေဆိုတဲ့ အဲဒီသည်းခြေကလည်း မရှိဘူးနော် (မှန်လှပါဘုရား)။
သေမှံ = ဆိုတဲ့ သလိပ်ကလည်း မရှိဘူးနော် … (မှန်ပါဘုရား)။ ပုဗ္ဗော = ပြည်ဆိုတာတွေလည်း နတ်မှာ မရှိဘူး (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် သူတို့မှာ ဥာဏ်မျက်လုံးနဲ့ ဖွင့်ကြည်လိုက်တဲ့အခါ လူ့ပြည်က အထုံပါလာတဲ့ ဆရာသမား ပြောလိုက်တဲ့သစ္စာ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြင်တဲ့သစ္စာတွေဟာ ဟိုကျတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ပြီး သကာလ ဒကာကြွယ် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာတောင် ဖြစ်နိုင်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ငါသေရမှာ မကြောက်တော့ဘူးဟေ့လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချကြ … (မှန်လှပါဘုရား)။
သေတော့ သေရမှာပေါ့ဗျာ … (မှန်လှပါဘုရား) ကြောက်သေတော့ဖြင့် မသေရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဥစ္စာ ဆုံးဖြတ်ချက် … (မှန်လှပါဘုရား)။
သစ္စာသိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့် … (မှန်လှပါဘုရား)။ မယုံမရှိနဲ့ ဒီဒကာ ဒကာမတွေ ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကို လက်သည်းကလေးနဲ့ ကုတ်လို့တော့ နာမှုလေးတစ်ခု ဒုက္ခလေးမပေါ်လာ ဘူးလား … (ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား)။
ပေါ်ပြီ ဒီနာမူနာလေးဟာ ပျောက်ကော မသွားဘူးလား … (သွားပါတယ်ဘုရား)။
အင်း ဒါဖြင့် သူပေါ်တာက ဖြစ်တာ၊ ပျောက်တာက ပျက်တာဆိုတော့ ဘာသစ္စာလေးပါလိမ့် … (ဒုက္ခသစ္စာလေးပါဘုရား)။
သြော် … ဒါဖြင့် ဒို့ နာတာလေးကလည်း ပေါ်ပျောက်၊ ယားတာလေးကလည်း ပေါ်ပျောက်၊ ကောင်းတာလေးကကော (ပေါ်ပျောက်ပါဘုရား)။
အဲ့ဒါသိရင် သစ္စာသိတာ … (မှန်လှပါဘုရား)။ သစ္စာသိတာပဲဆိုတာ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ လေးလေးစားစား မှတ်လိုက်စမ်းပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲတော့ သစ္စာက သစ္စာ၊ သိတာက မဂ္ဂသစ္စာ … (မှန်လှပါ) အဲဒီသိတဲ့အချိန်မှာပဲ ဒကာကြွယ်၊ မောင်ဘသော်၊ ဦးလှဘူးတို့ ကိလေသာက သေနှင့်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒီလောက်ထိအောင် မဂ်တစ်ကြိမ် ပေါ်လိုက်တဲ့ အကြိမ်သနည် အင်မတန်မှ ပြင်းပြတယ်ဆိုတာ ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါတယ်ဘုရား)။
ကဲဒါဖြင့် ဒီဟာလေး နှလုံးသွင်းပြီး သကာဖြစ်စေ သေသွားပြီဆိုတော့ သုဂတိရောက်ပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
သွေး၊ ပြည်၊ သလိပ်၊ သည်းခြေမရှိတဲ့ နတ်ဖြစ်တော့ ဥာဏ်နဲ့ပြန်ပြီး သကာလ ချက်ချင်းပဲ သတိရသောကြောင့် ဒကာကြွယ် သူ့ခန္ဓာ သူပြန်ကြည့်လိုက်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ပြန်ကြည့်လိုက်သည်နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ ငါဒုက္ခသစ္စာကြီး ပြန်ဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ သိလိုက်သည် နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်း နတ်အမြင်က သည်းခြေ သလိပ်၊ သွေးတွေ မဖုံးတဲ့အတွက် ထက်မြက်တဲ့ ဥာဏ်နဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ခါတည်း သောတာပတ္တိ မဂ်ဥာဏ်ဖြစ်သွားတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘာပူစရာရှိသေးတုံး … (ဘာမှ မရှိပါဘူးဘုရား)၊ ကဲ ဒါဖြင့် ဒီသာသနာ ဒကာ ဒကာမတို့ ရင်ခွင်ထဲ မှာ သောတာပန် မတည်တဲ့အခါ သူက တည်ချင်လျှက် အကယ်၍ မတည်ခဲ့ဘူးထားရင် မပူပါနဲ့လို့ အင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိတော်က ဟောပြန်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
တစ်နံပါတ် ဒကာ ဒကာမတွေ ရင်ခွင်ထဲ တည်ချင် တည်မယ် … (မှန်လှပါ) မတည်လို့ရှိရင်တော့ မပူပါနဲ့ကွာတဲ့ နတ်ပြည်မှာ ကျုပ်တို့ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ပဲ ထားပါတော့ ဒကာကြွယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
လူ့ပြည်မှာ အနှစ်တရာမှ တာဝတိံသာက တစ်ရက်ရှိသေးတာကိုး … (မှန်လှပါဘုရား)။ ကဲ လူ့ပြည်မှာ အနှစ် နှစ်ထောင်ထား၊ တာဝတိံသာက ရက်နှစ်ဆယ်မနေဘူးလား (နေပါတယ်ဘုရား)။
အဲ ခု သာသနာနှစ်ထောင်ငါးရာဆိုတော့ သူတို့မှာ ရက်ပေါင်း နှစ်ဆယ့်ငါးရက်ကျော်ကျော်လေး ရှိသေးတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတာ တာဝတိံသာ နတ်ပြည် နတ်သက်နဲ့ တွက်လိုက်ရင် ရက်ပေါင်း ဘယ်လောက် ရှိသေးတုံး … (နှစ်ဆယ့်ငါးရက်ပါဘုရား)။ နှစ်ဆယ့်ငါးရက်နဲ့ နာရီပိုင်းကလေး … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒါပဲ ရှိသေးတော့ ဤမှာတို့ရက် နှစ်ဆယ့်ငါးရက်ရှိသေးတာ ဒို့ဘုရားတရားမနာရတာ နတ်တွေက … (မှန်လှပါဘုရား)။
ရက်နှစ်ဆယ့်ငါးရက်သာ ရှိသေးတယ်ဆိုပြီး သူတို့ တရားတွေကတော့ ရက်များနေတဲ့အတွက် ဒကာကြွယ် မမေ့သေးဘူးပေါ့ဗျာ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲတော့ နတ်သဘင် အစည်းအဝေးကျတော့ ခုနက ဒီက သစ္စာသိသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ တရားနာ ရတော့ သူတို့က သစ္စာတရား ဟောရက်နေပြန်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲဒီလို ရင်ခွင်ထဲ မတည်ပဲနဲ့ သစ္စာတရားဟောတဲ့ နတ်သဘင်ပွဲမှာပဲ နာရပြန်လို့ရှိရင်လည်း ခုနက သွေး၊ ပြည်၊ သလိပ်၊ သွေးပြည်မရှိတဲ့ ဥာဏ်နဲ့ သူ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီတရားပွဲထဲမှာပဲ ဒကာ ဒကာမတို့ သောတာပန် သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ နှစ်နံပါတ်အချက် … (မှန်လှပါဘုရား)။
တစ်နံပါတ်က ရင်ခွင်ထဲနော် … (မှန်လှပါဘုရား)။ နှစ်နံပါတ်က ရင်ခွင်ထဲ သောတာပန်မတည်လို့ တရားနာတဲ့ပွဲမှာ တည်ရတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
အားငယ်စရာပါသလား … (မပါပါဘူးဘုရား) အားငယ်စရာက ဒကာ ဒကာမတွေ ဘုန်းကြီးပြော တာကို သစ္စာလို့ မသိမှာ တစ်ခုသာ အားငယ်စရာကောင်းတာ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘုန်းကြီးက စိတ်ချတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။ ငါနေ့တိုင်း တဖွဖွ ပြောနေတာပဲ နေ့တိုင်း ကယ်တင်နေတာပဲ ဒီဒကာ ဒကာမတွေကို တကယ် ကယ်ပေးနေတာပဲ။
ယားတာ ဘာသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာ သူတို့လျှောက်တယ်၊ နာတာဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာလို့လျှောက် တယ်။
ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင် ပေါ်ပျောက်သွားတာ ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
အဲတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို နှလုံးသွင်းသွင်း ဒီသစ္စာတွေဟာ မြင်နေတာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲတော့ ဒီတရားနာနေတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေဟာ မြင်ပြီးသား၊ သိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်နေသော ကြောင့် ခုနက ရင်ခွင်ထဲမှာလည်း တည်ရမယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
တရားနတ်သဘင် တရားပွဲ၍ကော … (တည်ရမှာပါဘုရား)။ ဒီလို မတည်သေးတောင် အင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိတော်ကြီးက မတည်နဲ့ဟေ့ နောက်ဒကာ ဒကာမတွေအတွက် သစ္စာသိထားရင် မတည်ပါနဲ့တဲ့ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒကာ ဒကာမတို့ အားပေးတာ မဟုတ်ဘူး ပါဠိတော်အတိုင်း ပြောနေတာ … (မှန်လှပါဘုရား) အားပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ ဟောပြီး နေပြာနေတာလို့လည်း မှတ်လိုက်စမ်းပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲတော့ကိုးတဲ့ ဒီအထဲမှာ ခုပြောဟော လုပ်နေတာလည်း ဘုန်းကြီးများ အနှစ်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိ တော့ … (မှန်လှပါ) သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတလည်း ဦးလှဘူးတို့ ဒီထဲက တော်တော်သေကြတယ် … (သေကြပါတယ်ဘုရား)။
အဲဒီ သေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ နတ်ပြည်မှာ ရောက်နေနှင့်ကြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။ အရိယာအဖြစ် နေနှင့်ကြပြီ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲတော့ ခု ဒကာ ဒကာမထဲက ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမထဲက အင်း ဒီနေ့လား နက်ဖြန်လား မဆိုနိုင်ဘူး ဟိုဘက်သလား မပြောတတ်ဘူး သေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ် … (မှန်ပါဘုရား)။
အဲဒီပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ထို့အတူပဲ သစ္စာနာထားရတဲ့အတွက် နတ်ပြည်လည်းရောက်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
နတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ ခုနက အရင်သေနှင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ အရင် သောတာပန် သကဒါဂါမ် အနာဂါမ် တည်ပြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နတ်ပြည်ကနေပြီး စောင့်နေတော့ သူတို့က သက်တန်းက ဦးတာကိုးဗျ … (မှန်လှပါ)။
အင်း … ဒီက ဒကာ ဒကာမတွေလည်း စုတေမနေသေလွန်တော့ လိုက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ သြော်ငါ့မိတ်ဆွေ တရားနာဖေါ်လာပြီ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒကာကြွယ် ဟိုက သိနေပြီ … (သိနေပါပြီဘုရား)၊ အဲတော့ တရားနာဖော်လာပြီဟေ့ ဒို့အိမ်ကလူတော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးဆီမှာ အတူတူ ဒို့သစ္စာတရားတွေ နာနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီး အရင်ရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ငါ့အရှင် မမေ့နဲ့နော် … (မှန်လှပါဘုရား)။
မင်း ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ဟာ ဒုက္ခသစ္စာကွလို့ လက်တို့ပြီး နတ်နတ်ချင်း ဟောတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲဒီ ဟောပြောမှာလည်း ဒကာ ဒကာမတို့ သောတာပန် သကဒါဂါမ် တည်ပြန်တာပဲ (မှန်ပါ့ဘုရား) ပူစရာများ ရှိရဲ့လား … (မရှိပါဘူးဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တော့ဖြင့် ဘယ်သူမှ မပိုင်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့် သေရမှာ ဆိုတာ ကတော့ဖြင့် သီတင်းကျွတ်တယ်ဆိုကတည်းက အသေဘက် တိုးပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
တိုးပင်တိုးငြားသော်လည်း ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ သြော် ဒို့ သစ္စာသိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ ဒီဘ၀လည်း ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်၊ မပြီးလည်း မပူပါဘူးဟ … (မပူပါဘူးဘုရား) ဆိုပြီး သကာလတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ သောတာပန် တည်နိုင်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ နတ်ပြည်မှာလေ … (မှန်လှပါဘုရား)။
တစ်ယောက် တစ်ယောက်တရားကို ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသော်လည်း ရက်ပေါင်း နှစ်ဆယ့်ငါးရက် လောက်နဲ့ နာရီပိုင်းသာ ရှိနေသောကြောင့် ဟိုမှာ သစ္စာတရားတွေ ဟာနေတဲ့ နတ်တွေကလည်း ရှိလို့ နတ်သဘင် အစည်းအဝေး သွားလို့ အဲဒီတရားနာရတဲ့အချိန်မှာပဲ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒီပြင်တရား၊ မဟုတ်ဘူးနော်၊ သစ္စာတရားနာရမှ … (မှန်လှပါဘုရား)။ သစ္စာဟာ အရေးအကြီးဆုံး … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒကာကြွယ် ဘယ်တရား အရေးအကြီးဆုံးပါလိမ့် … (သစ္စာတရား အရေးအကြီးဆုံးပါဘုရား)။
အေး … ဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီလောာက်လူကျပ်ကျပ်နဲ့ ဒီလောက် မီးထွန်းစရာ ကိစ္စတွေထဲ မှာ ဆရာဘုန်းကြီးဆီလာပြီးသကာလ နည်းယူကြတော့ …။
သြော် … ဒီနေ့ သိရတဲ့အသိဟာဖြင့် ဒို့ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့ အသိပါလားလို့ ၀မ်းမြောက်လိုက် ကြစမ်းပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ ရဲရဲတင်းတင်းသာနေပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။ ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ သေပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘာမှ ကြောက်စရာမရှိဘူးဆိုတာ သေသေချာချာ မှတ်ပါ … (မှန်လှပါဘုရား) ဒကာ ဒကာမတွေ အင်မတန် စေတနာနဲ့ အင်မတန် ဘုရားဟော အမှန်ကြီးကို ပြောနေပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ကိုင်း ဒီတင်မှ မသေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ နတ်ပြည်လည်း ရောက်ပြီး တော်တော်လေး လူသားမြောက်လာတဲ့ အခါကျလို့ရှိရင် ကိုယ့်နတ်ပြည်မှာ အင်း တချို့နက်ကလေးတွေလည်း ဒကာ ဒကာမတို့ ဖျတ်ခနဲ၊ ဖျတ်ခနဲ၊ နတ်သက်စေ့လို ပျောက်သွားတာလည်း ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အင်း ဒါလေး မြင်လိုက်တာနဲ့ပဲ ဘယ်သူမှ တရားမဟောပဲနဲ့ ဒီက သစ္စာတရား နာပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း သြော် … ဒုက္ခသစ္စာမို့ ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုး သိပြီး ကိုယ်က သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်တည်ပြန်တာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲတော့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ခုပြောခဲ့တဲ့ လေးချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီး ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး အင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိတော်ကြီးမှာ သေသေချာချာ ဟောထားတဲ့အတွက် ဒို့ဖြင့် ယခုမသိသေး တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က သိအောင်လုပ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
သိပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်က ပွားသာနေပါ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ အခု မဂ်ဆိုက်ပြီး သေလည်း ကောင်းတာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒုတိယ ဘ၀မှ ရင်ခွင်ထဲမှာ ဆိုက်လဲ ကောင်းတာပဲ … (မှန်လှပါ)၊ နတ်သဘင် အစည်းအဝေး တရားပွဲမှာ ဆိုက်ရင်ကော (ကောင်းပါတယ်ဘုရား)။
နောက် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း နတ်တွေက တရားနာဖို့ နတ်တွေကလာပြီး ကိုယ့်သတိပေးလို့ သစ္စာတွေ နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ မဂ်ဆိုက် ဖိုလ်ဆိုက်ဖြစ်လည်း ကောင်းတာ (ကောင်းပါတယ်ဘုရား)။
အဲတော့ ဒီ ဒကာ ဒကာမတွေမှာတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ နတ်ပြည်မှာ ဒကာကြွယ် မနည်းတော့ ဘူး … (မနည်းပါဘူးဘုရား)။
ဒီတရားပွဲကလည်း လူများတဲ့ တရားပွဲဖြစ်တော့ သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း သေလို့ ရောက်နှင့်ကြပြီပေါ့ ဗျာ … (မှန်လှပါ)။
ရောက်နှင့်ကြလို့ ဒီက ဒကာ ဒကာမတွေပဲ မျှော်လင့်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဒုိ့ မိတ်ဆွေတွေ ဘယ်လောက်လာပါ့မတုံး … (မှန်လှပါ)။
လာရင် ကလေးများလိုပဲတဲ့၊ ငါရှင် ဒိုိ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ ဒီခန္ဓာ ဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာ နှလုံးသွင်းပါ လားဆိုတာ ကလေးချင်းသာ လက်တို့ပြီး ပြောသလို … (ပြောပါတယ်ဘုရား)။
အရင်သေနှင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လာလာလက်တို့ ပြောတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ပြောသည်နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဒီကအရှိန်ကလည်း ပါပြီးသား ဖြစ်လေသောကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေမှာ တဲ့ ပြောလိုက်လို့ ကြားလဲကြားလို့ ဥာဏ်ထဲလဲ ထင်ပါရော သောတာပန် သကဒါဂါမ် အနာဂါမ် ရဟန္တာ ဖြစ်တော့မှာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲဒီတော့ ဟိုမှာလည်း မိတ်ကောင်းတွေက ရှိတာတစ်မျိုး … (မှန်လှပါ)၊ ဆိုတော့ အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ ပူစရာ၊ ပင်စရာ ဆွေးစရာ ရှိသေးရဲ့လား … (မရှိပါဘူးဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် အားကြီး ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာ ဒကာ ဦးလှဘူးတို့ မောင်ဘသော်တို့ ပေါ်လောက်ပါ ပြီ … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
ကဲ ယနေ့ ဟောတဲ့တရားမှာ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်ကြီးမှာ ကိုယ်တော်တိုင်ဟောလို့ သစ္စာသိသေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပူစရာ မရှိပုံကို ပြလိုက်တာ … (မှန်လှပါဘုရား) ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
ဘာသိသေမှ (သစ္စာသိသေမှပါဘုရား) သစ္စာသိပြီး သေလို့ရှိရင် ဘာမှပူစရာ မရှိဘူးဆိုတော့၊ ဘုန်းကြီးကပဲ ဒီနေ့မှ လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒီနေ့မှကြုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သစ္စာသိတဲ့ သိဖို့ရာ အရေးကိုလည်း ဒကာကြွယ် ပြန်ပြီးပြောပါ့မယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ပြန်ပြီးပြောပါ့မယ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးကို ကြည့်ကြပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ သစ္စာသိဖို့ ပြောတော့မယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။ သစ္စာသိဖို့ ပြောတော့ မယ်ဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟာ ရေးထားတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လားလို့မေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒကာ ဒကာမတို့ နော် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ခန္ဓာဖြစ်စဉ် ဒကာ ဒကာမတို့ တရားနာတဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့၏ ခန္ဓာဖြစစဉ် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။ ရေးထားတာလား ကိုယ့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လား … (ကိုယ့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပါ ဘုရား)။
အင်း … အဖိုးတန်လိုက်တာ သြော် ဒီဥစ္စာစာထဲက ဒီလိုပါတယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး … (မှန်လှပါဘုရား)။
စာက ဒီလိုပါတာမဟုတ်ပါဘူး ဒကာ ဒကာမတို့၏ ခန္ဓာက ဒီလိုဖြစ်နေတာ … (မှန်လှပါဘုရား) စာက ဒီလိုပါတာလား၊ ခန္ဓာက ဒီလိုဖြစ်တာလား … (ခန္ဓာက ဒီလို ဖြစ်တာပါဘုရား)။
အဲ … ခန္ဓာက ဒီလိုဖြစ်တော့ ယခုဘ၀ လူဖြစ်ရှုံးလေးတော့ သိလည်း သိပြီးပါပြီ သို့သော် အစလေးစတဲ့ အနေနဲ့ ပြောရဦးမယ် … (မှန်လှပါ)။
ဒကာ ဒကာမတို့ နောက်ဘ၀က အ၀ိဇ္ဇာဆိုတဲ့ သစ္စာလေးပါးမသိတော့ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ နေခဲ့ကြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ နောက်ဘ၀က ဘာနဲ့ နေခဲ့ကြတုံး … (အ၀ိဇ္ဇာနဲ့နေခဲ့ပါတယ်ဘုရား)။
သြော် … သစ္စာမသိတဲ့ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ နေခဲ့ကြတယ်နော် … (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ နေခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေသည်တဲ့၊ သစ္စာမသိတော့ မွေးရာပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ ကုသိုလ်အလုပ်တွေ လည်း ပြုပါတယ် (ပြုပါတယ်ဘုရား)။
ပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ သင်္ခါရပေါ့ဗျာ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဒါဖြင့် မသိလို့ ကုသိုလ်လုပ်သည် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
လုပ်ပြီးသကာလ ဒကာ ဒကာမတို့ ကုသိုလ်ရိုးရိုး လုပ်တာလားတဲ့ နောက်ဘ၀ လူဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာလားဆိုတော့ မေးရင် ဘယ့်နှယ်ဖြေကြမတုံး … (နောက်ဘ၀ လူဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာပါဘုရား)။
သြော် … ဒါဖြင့် လူဖြစ်ချင်တဲ့ အကုသိုလ် သင်္ခါရလို့ပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။ ဒါဖြင့် ကုသိုလ်လည်း လုပ်တယ်၊ ဆုလည်း တောင်းတယ်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ၌တဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် ရောနေတယ် … (ရောနေပါတယ်ဘုရား)။
ကုသိုလ်လုပ်တာက ကုသိုလ် … (မှန်ပါ့)၊ လူဖြစ်ချင်တာက တဏှာ … (မှန်ပါ့ဘုရား)
အေး … ကုသိုလ်နဲ့ တဏှာနဲ့ ရောနေတယ် … (ရောနေပါတယ်ဘုရား) သြော် … ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ရောပါလိမ့်မလဲလို့ မေးတဲ့အခါကျတော့ မသိလို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ရောမိတာ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘယ်လိုပါလိမ့်မနတုံး … (မသိလို့ ရောမိတာပါဘုရား) မသိလို့ ရောမိတာ … (မှန်ပါ့)၊ ရှင်းကြပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
အင်း ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ရောမိကြပါလိမ့် … (မသိလို့ ရောမိတာပါဘုရား)။ မသိလို့ ရောမိကြတယ် နော် … (မှန်ပါ့)။
ရောတယ် ဆိုကတည်းက အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ … (သင်္ခါရပါဘုရား) မသိလို့ ရောတော့ သင်္ခါရဖြစ်သွား တယ် … (မှန်ပါ့) ဒကာကြွယ် ဖြစ်သွားပြီ … (ဖြစ်သွားပါပြီဘုရား)။
အခုမှရတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒကာသစ်တို့၏ ကုသိုလ်တွေကိုလည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ဥာဏ်နဲ့ကိုက်ပြီး ကြည့်ကြပါနော် … (မှန်လှပါဘုရား)။
အဲ ဒါဖြင့် ဒါက နောက်ဘ၀က အ၀ိဇ္ဇာပစ္စယာ သင်္ခါရာလုပ်ခဲ့တယ် … (လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား)၊ မလုပ်ခဲ့ဘူးလား … (လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား)။
လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ အ၀ိဇ္ဇာက ဘာတုန်းဆိုတော့ ဒီလာကြည့်လိုက် မြှား အနီးလေးပြတာ ကိလေသ၀ဋ် … (မှန်လှပါ) အ၀ိဇ္ဇာဟာ ကိလေသ၀ဋ်ပါပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
သင်္ခါရက ကမ္မ၀ဋ် (မှန်လှပါ) သြော် … ကိလေသ၀ဋ်နဲ့ ကမ္မ၀ဋ်လုပ်ခဲ့ကြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
မသိတာက ဘာဝဋ်ပါလိမ့် … (ကိလေသ၀ဋ်ပါဘုရား) ကုသိုလ်ပြုပြီး ဆုတောင်းတာက … (ကမ္မ၀ဋ်ပါဘုရား) သြော် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ နောက်ဘ၀ကလာတာ သစ္စာမသိခဲ့တဲ့အတွက် ကိလေ၀ဋ်နဲ့ ကမ္မ၀ဋ်ပဲ လုပ်ခဲ့ကြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒကာကြွယ် ဒါက ခါတိုင်း ဟောတာနဲ့ မတူဘူးလို့ … (မှန်လှပါ) ၀ဋ်ကို မူတည်ဟောတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဘာမူတည် ဟောပါလိမ့် … (၀ဋ်ကိုမူတည်ဟောပါတယ်ဘုရား)။
၀ဋ်ကို မူတည်ဟောတယ်လို့ သေသေချာချာ မှတ်ကြပါနော် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ သစ္စာမသိတာက ဘာဝဋ်တဲ့ (ကိလေသ၀ဋ်ပါဘုရား)။
ကုသိုလ်ပြုပြီး ဆုတောင်းတာက … (ကမ္မ၀ဋ်ပါဘုရား) သြော် … ဒကာ ဒကာမတွေက ၀ဋ်ကျွတ်ချင် လိုက်တာကလည်း လွန်လို့ ကိုယ်လုပ်တာကလည်း ၀ဋ်နှစ်ပါးလုပ်ခဲ့တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘယ်တုံးကလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့ လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလက … (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ ဘယ်တုန်းကပါလိမ့် (လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလကပါဘုရား)။
သြော် … ဘာဝဋ်လုပ်ခဲ့ပါလိမ့် … (ကိလေသ၀ဋ်နဲ့ ကမ္မ၀ဋ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား)။ မောင်ဘသော် ဒီနေ့ တရားကတစ်မျိုး … (မှန်လှပါဘုရား)။
၀ဋ်နဲ့ရှင်းပြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။ ဒကာကြွယ် သဘောပါပလား … (ပါပါတယ်ဘုရား)။
နောက်က ဒကာ ဒကာမတွေ ဒါ ဒကာ ဒကာမတွေ မသေခင် ဘ၀က လုပ်ခဲ့တာနော် ... (မှန်ပါ့ဘုရား)။
မသေခင်ဘ၀က လုပ်ခဲ့တာတွေက အင်း မသိတာ လုပ်ခဲ့တာက ကိလေသ၀ဋ် ... (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ ကုသိုလ် ပြုပြီးသကာလ လူ့ပြည်ဆုတောင်းတာက … (ကမ္မ၀ဋ်ပါဘုရား)။
ဒါကြောင့် ကမ္မ၀ဋ်က နှစ်ပါးလို့ ဆိုလိုက်တယ်နော် ... (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ ကိလေသ၀ဋ်ကလည်း သုံးပါး ပေါ့ဗျာ ... (မှန်ပါ့ဘုရား)။
ဒါ သုံးပါး အသာထားပါတော့ သုံးပါးသိပြီ ကြိုးအတိုင်းလိုက်ပြီး သကာလ ဒကာ ဒကာမတွေ သိမယ်ဆိုရင် တဏှာ ဥပါဒါန်ထည့်တာပဲ ... (မှန်ပါ့)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် ကိလေသ၀ဋ်နဲ့ ကမ္မ၀ဋ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေဟာ သေတာပဲ ... (မှန်ပါ့ဘုရား)။
သေပြီး စုတေးပြီးသကာလ သွားတဲ့အခါ ဟောဒိ ဒကာ ဒကာမတွေ ၀ိညာဏ်ဆိုတဲ့ ပဋိသန္ဓေ ၀ိညာဏ် ပဋိသန္ဓေနေရပါတယ် ... (မှန်ပါ့ဘုရား)။
ပဋိသန္ဓေနေရင် နာမ်ရုပ်ပေါ်ရတယ် … (ပေါ်ပါတယ်ဘုရား)။ နာမ်ရုပ်ပေါ်လို့ရှိရင် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်မလာပေဘူးလား … (လာပါတယ်ဘုရား)။
ကိုယ်စိတ်လာရင် ဖဿ ... (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ ဝေဒနာ ... (မှန်ပါ့ဘုရား) ပေါင်းလိုက်တော့ ခန္ဓာငါးပါး ... (မှန်ပါ့ဘုရား)။
သြော် … ဒကာ ဒကာမတွေ ခု ခန္ဓာ ငါးပါးဟာ ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ကုသိုလ်လည်းပြုပြီး သကာလ အကုသိုလ် တဏှာက ဆုတောင်း လိုက်တဲ့အတွက် ခန္ဓာငါးပါး ဒုက္ခသစ္စာတရား ... (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘယ်အချိန်များ ရရှာပါလိမ့်မတုန်းဆိုတော့ ယခု ပစ္စုပ္ပန် ... (မှန်လှပါဘုရား)၊ သြော် … တရားနာနေတာသည် ဘာသစ္စာတုန်း … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဟော … သူ့ပြန်ပြတယ် … (မှန်ပါ့)၊ ဒါကြောင့် သစ္စာသိစေချင်တယ်ဆိုတာ ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
ဒီတရားနာနေတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာ အတိတ်ဘ၀က ဒီနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီနေရာမှာသေပြီး အကြောင်းအကျိုးထပ်ပြီး ဒုက္ခသစ္စာ ခန္ဓာငါးပါးရတယ် … (ရပါတယ်ဘုရား)၊ ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ခန္ဓာငါးပါး ဘာသစ္စာတရားတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာတရားပါဘုရား)။
သြော် … ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် ဒကာ ဒကာမတို့ သစ္စာသိအောင် ပေါ်ပြီ ... (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒို့ သစ္စာသိအောင် ဟောရလို့၊ နာရလို့ရှိရင်ဖြင့် ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေဟာ ဒို့ သေသေချာချာ နတ်ပြည်လည်းရောက်၊ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ သောတာပန်တည် … (မှန်ပါ့)။
သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း ခဏနေမှ တရားနာမှတည် (မှန်ပါ့ဘုရား) သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း အရင်ဦးတဲ့လူတွေက နတ်ပြည်ရောက်နှင့်ပြီး သကာလ ဒို့သွားတဲ့အခါ သူတို့က လက်တို့ဟောတာနဲ့ တည်ဆိုတာကော မရှိဘူးလား … (ရှိပါတယ်ဘုရား)။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရပြီးသား နှလုံးသွင်းလို့ တည်တာကော မရှိဘူးလား … (ရှိပါတယ်ဘုရား)။
အဲဒီကဲ့သို့ ရှိပြီး သကာလ နေတော့ ဒီက သိထားတဲ့ အရေးဟာ တစ်နံပါတ် အရေးကြီးတယ် … (ကြီးပါတယ်ဘုရား)။
ဒကာကြွယ်ဒီကသိဖို့ အရေးက … (တစ်နံပါတ်အရေးကြီးပါတယ်ဘုရား) ဒီကသိမှ ဟို လေးချက် သွားတိုးမှာ။
ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘယ်လိုပဲ အိုက်အိုက် ဘယ်လိုပဲ လူတွေကကျပ်ကျပ် ကြိုးစားပြီးကြည့်ပါ … (မှန်ပါ့) ကြိုးစားပြီး မှတ်ပါ … (မှန်ပါ့)။
ဒကာကြွယ် တိုက်တွန်းရ … (တိုက်တွန်းရပါတယ်ဘုရား) အကျိုးစီးပွားအလိုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးဗျ … (မှန်လှပါ)
အကျိုးစီးပွား အလိုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမတွေ တိုက်တွန်းတာကို ဘုန်းကြီးကလည်း လွန်လွန်းတယ်လို့ မဆိုလိုက်ပါနဲ့ ကိုယ်က ကိစ္စမပြီးသေးလို့ ဒီလောက်တိုက်တွန်းတာကိုးလို့ မှတ်လိုက်ပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။ ရှင်းပြီနော် … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
တရား ကိစ္စဟာ လိုနေသေးလို့ တိုက်တွန်းနေရပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား) ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
ကိုင်း … ဒါဖြင့် ဒီက ကိလေသ၀ဋ် ကမ္မ၀ဋ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဟောဒီ ဒကာ ဒကာမတို့၏ ၀ိဥာဏ်၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာဆိုတဲ့ ယခုတရားနာနေတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးဟာ ဒုက္ခသစ္စာ (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
ဒုက္ခသစ္စာကို ၀ဋ်တော့ ဘယ်ထဲသွင်းသတုံးလို့ မေးတော့ ၀ိပါက၀ဋ်ထဲ သွင်းလိုက်ပါ … (မှန်ပါ့)၊ အကျိုးပေးပြီး (မှန်ပါ့)၊ ဒုက္ခကြီးနဲ့ အကျိုးပေးပြီး (မှန်ပါ့) သဘောကျလား … (ကျပါတယ်ဘုရား)။
အဲတော့ ၀ိပါက ၀ဋ်ဖြစ်ပြီးသကာလ နေတော့ ဒကာ ဒကာမတိုိ့အခု ၀ဋ်သင့်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည် ဒကာ ဒကာမတို့ ကောင်းကောင်းရထားတာလား … ၀ဋ်သင့်နေတာလား … (၀ဋ်သင့်နေတာပါဘုရား)။
သြော် … သင့်မှာပဲ ဒကာ ဒကာမတို့ ကိလေသ၀ဋ်နဲ့ ကမ္မ၀ဋ် လုပ်ထားတော့ သေသည်၏ အခြားမဲ့ ၌ ဒီဝိပါက၀ဋ်တော့ ရရမယ် … (ရပါတယ်ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီခန္ဓာကြီးဟာ ဘာဝဋ်ပါလိမ့်ဗျာ … (၀ိပါက၀ဋ်ပါဘုရား) ၀ိပါက၀ဋ်လို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
ဒကာ ဒကာမတို့ ဘာဝဋ်ပါလိမ့် … (၀ိပါက၀ဋ်ပါဘုရား) ၀ိပါကဆိုတာ အကျိုးပေး … (မှန်ပါ့) ၀ဋ္ဋဆိုတာက လုံးတာ … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
အကျိုးပေးခြင်း လုံးထွေးနေတော့ … (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား … (ကျပါတယ်ဘုရား) အကျိုးပေးဖြင့် လုံးထွေးနေပြီ ဒကာ ဒကာမတို့ … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
ဒုက္ခကို ပင်လယ်ဝေနေပြီ၊ သားပူ၊ သမီးပူ၊ ဆွေပူ၊ မျိုးပူနဲ့ (မှန်ပါ့) မင်းပူ၊ စိုးပူတွေနဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒုက္ခပယ်လယ်ဝေပြီးတော့ ၀ိပါက၀ဋ်ကြီးဟာ ခု သင့်နေတာမှ ဟုတ်ကြရဲ့လား… (ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား)။
ဟုတ်တယ်တဲ့ ဒါဖြင့် ၀ိပါက၀ဋ်ဟာ ဘာသစ္စာပါလိမ့် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ သားပူလာလည်း အင်း ဒါ ဒုက္ခသစ္စာပဲ ဥာဏ်နှလုံးသွင်းလိုက် … (မှန်ပါ့)။
သမီးပူလာရင် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) မင်းပူလာရင် (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ နှလုံးသွင်းပြီးနေ (မှန်ပါ့)။
နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒါ သစ္စာသိတာပဲ … (မှန်ပါ့) သဘောပါပလား … (ပါပါပြီဘုရား)။
ဒါဖြင့် ၀ိပါက ၀ဋ်ထဲမှာ ဒကာ ဒကာမတွေ နှလုံးသွင်းရမှာ … (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ နှလုံးမသွင်းလို့ရှိရင် ဒကာ ဒကာမတွေ ဟောဒီမှာ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာ၊ ကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာ။ ဥပါဒါန် ကံတွေလာ လိမ့်မယ် … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
မလာပေဘူးလား … (လာပါတယ်ဘုရား) လာရင် ဒကာ ဒကာမတို့ ဟောဒါ ကိလေသ၀ဋ်နဲ့ ကမ္မ၀ဋ် ပြန်လှည့်နေတာ … (မှန်ပါ့ဘုရား)။
တော်ပမလား … (မတော်ပါဘူးဘုရား)။ မတော်တော့ ဒါတွေဟာ ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာတွေ ပါဘုရား)။
အဲ ၀ိညာဏ် နာမ်ရုပ်ထားပြီးသကာလ သြော် … ဒို့ခန္ဓာကြီးဟာ ရုပ်ကလေးပေါ်လဲ ဒုက္ခသစ္စာ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ နာမ်ကလေးပေါ်ရင်ကော … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ကော … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ဖဿလေးပေါ်ရင် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) လက်ရှိ နှာခေါင်းစိတ်ကလေးပေါ် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) စားစိတ်ကလေးပေါ် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ယားတယ်၊ နာတယ်၊ ကောင်းတယ်စိတ်ကလေးပေါ် (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ ကြံတယ်၊ တွေးတဲ့ စိတ်ကလေးပေါ် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ပေါ်ရာ ဒုက္ခသစ္စာချည့် သွင်းလိုက် … (မှန်ပါ့)။
အဲတော့ ပေါ်တာက ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ဒီခန္ဓာထဲက ပေါ်လာတာ ဒုက္ခသစ္စာကြီး လို့ နှလုံးသွင်းလိုက်ပါ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရှင်းကြပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
အဲတော့ တပည့်တော်တို့ သစ္စာမသိသေးပါဘူး ဘုရားလို့လျှောက်မလား၊ ခန္ဓာထဲက ပေါ်တာ ဒုက္ခသစ္စာချည့်လို့ သိတာနဲ့ သိပါပြီဘုရားလို့ လျှောက်ကြပါနော် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ခန္ဓာထဲက ဘာပေါ်ပေါ် ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။ အဲ ခန္ဓာထဲက ဘာပေါ်ပေါ် ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ ဒီခန္ဓာထဲက ယားတာလည်း ဒုက္ခသစ္စာ၊ နာရင်လဲ ဒုက္ခသစ္စာ၊ ကောင်းရင်လဲ ဒုက္ခသစ္စာ … (မှန်ပါဘုရား)။
ဘာပြုလို့တုံး တစ်ကိုယ်လုံးက ဒုက္ခသစ္စာ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ကောင်းရင်လဲ ဘာဖြစ်တုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပဲ) ကောင်းတာလေးမြဲရဲ့လားလို့မေးတော့ ကောင်းပြီးပျောက်တာပဲ … (ပျောက်ပါတယ်ဘုရား)။
ပျောက် ဒုက္ခနဲ့ ပျက်ဒုက္ခနဲ့ မကြုံဘူးလား … (ကြုံပါတယ်ဘုရား) အဲဒါကြောင့် ဘာပေါ်ပေါ် ဘာသစ္စာ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
အဲဒီကဲ့သို့ ဒကာ ဒကာမတွေက ဒုက္ခသစ္စာကို ဤကဲ့သို့ သိသွားတော့၊ သြော် … ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာ တခြားလားမှတ်တယ်၊ ခန္ဓာကြီးထဲက တစ်ကိုယ်လုံးက ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ ထူးထူးခြားခြား၊ ခန္ဓာထဲက ပေါ်လာတာလည်း ဘာသစ္စာဆိုကြမတုံး (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
သိအောင်လုပ်နော် … (မှန်လှပါဘုရား) သိအောင်လုပ်ထား၊ ယားလည်း ဒုက္ခသစ္စာ၊ နားလည်း ဒုက္ခသစ္စာ၊ စားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
အေး … စားတဲ့စိတ်ကလေးကို (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။ ကုသိုလ်လေးပြုချင်တဲ့စိတ်ကို … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ မေတ္တာလေး ပို့ချင်တဲ့စိတ်ကို … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီး ပေါ်တာ ဒုက္ခသစ္စာလို့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေက လေးလေးစားစားသာ မှတ်လိုက် (မှန်လှပါဘုရား) ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့ ခန္ဓာငါးပါးဟာ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး၊ ငါး၊ ခန္ဓာငါးပါး … (မှန်လှပါဘုရား) ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
အဲတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာကြီး ဒုက္ခသစ္စာဆိုကတည်းကိုက သြော် … ငါ သစ္စာသိပြီ … (မှန်လှပါဘုရား) ငါ သစ္စာသိပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ထမင်းစားချင်တယ်၊ စားချင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလည်း … (ဒုက္ခသစ္စာလို့ မှတ်ရမှာပါဘုရား)၊ ၀,လာတဲ့အခါ၊ ၀,လို့ ပျို့တာ အန်တာ ဖြစ်လာတာဘာတုံး (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
၀လာလို အရင်ထမင်းတွေက အစာသစ်၊ နောက်အစာဟောင်းတွေက အရင်စားထားတဲ့ အစာဟောင်းတွေက ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်ချင်တော့ ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
သွားရ၊ လာရတာကော ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
အဲတော့ ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲတွေ့တယ် … (မှန်လှပါဘုရား) ဒကာ ဒကာမတို့ တခြားမှာ တွေ့သေးလား … (မတွေ့တော့ပါဘူးဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် ဒီခန္ဓာငါးပါးထဲက ဘာပဲပေါ်ပေါ် ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) အိုး … ဘယ်အချိန်များ ပေါ်ပါလိမ့်မတုံးဆိုတာ ကြည့်လိုက် ပစ္စုပ္ပန် (မှန်လှပါဘုရား)။
မသေခင်ပေါ်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား) ဒကာ ဒကာမတို့ မသေခင်ပေါ်ပြီး ဘာတဲ့ … (ပျောက်ပါတယ်ဘုရား)။ ဒါ ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတွေ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒါကြောင့် အကျိုးဖြစ်သောကြောင့် ၀ိပါက၀ဋ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ် … (မှန်လှပါဘုရား) ဒကာကြွယ် ကျေနပက်ပလား … (ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရား)။
သြော် … ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ သစ္စာသိချင်တာက ဒီဘ၀တွင် ကိစ္စပြီးစေချင်လို့ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ကွာတဲ့သစ္စာ သိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သုဂတိမှတစ်ပါး ဘယ်မှမသွားလို့ ဆိုတာကော ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် ငါသေရင် ဘာများ ဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘယ်တော့မှ မတွေးနဲ့ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒို့ ခန္ဓာထဲက ပေါ်သ၍ ဒုက္ခသစ္စာသိပြီး သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သေလို့ရှိရင် နတ်ရွာနသုဂတိမှတစ်ပါး ဘယ်မှ မသွားဘူးဆိုတာကို ဧကန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ … (မှန်လှပါဘုရား)။ ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
အားကိုးတရားလား၊ သစ္စာသိသေရင် သံသရာ မလည်ဘူးဆိုလျှက် ဟောတာဆိုတာလဲ ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါတယ်ဘုရား)။
နေရာကျလိုက်တာ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ်တဲ့နေ့ကြီးမှာ ဘုန်းကြီးများ ဒကာ ဒကာမတွေ ဥာဏ်မျက်လုံး ပွင့်ခဲ့တဲ့နေ့၊ လကလည်း ပြည့်တဲ့နေ့ ဒကာကြွယ်ရေ (မှန်လှပါဘုရား)။
မိမိဥာဏ်ကလည်း အလင်းရတဲ့နေ့ဆိုတော့ဖြင့် အလင်းတွေကို ဆုံးတဲ့နေ့၊ ကြုံတဲ့နေ့ဆိုရင် လွဲပါ့ မလား … (မလွဲပါဘူးဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် အဖိုးတန်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်းမှ ဒကာဒကာမတွေ ပြောစရာမရှိပါဘူး … (မှန်လှပါဘုရား)။
ယခု ခန္ဓာကြီးဟာ ဘာသစ္စာ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) အင်း ဘယ်ကာလပါလိမ့် … (ပစ္စုပ္ပန်ကာလပါ ဘုရား)၊ သြော် … ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာ တခြားယူမနေနဲ့ တရားနာရင်းကို ဘာသစ္စာ (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
သြော် … တရားနာရင်းကို နာတာလည်း ဒုက္ခသစ္စာ အိုက်တာကော … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
အင်း … ကြည့်နေရတဲ့ မျက်လုံး ကလေးကကော (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) အင်း ဒုက္ခသစ္စာချည်ပဲ သူတို့ကြည့်လိုက်၊ ပျက်လိုက်၊ ကြည့်လိုက်၊ ပျက်လိုက်၊ ကြည့်လိုက်၊ ပျက်လိုက်၊ မောင်ဘသော် ဒါက ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဦးဘူးရေ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ဒုက္ခသစ္စာမှ တစ်ပါး ခန္ဓာထဲက ဘာပေါ်သေးတုံး … (ဘာမှ မပေါ်ပါဘူးဘုရား)။
အဲ ဒကာဒကာမတို့ မယုံလို့ရှိရင် အလောင်းကောင်း အသုဘကြီးတစ်ခုကို အိမ်ပေါ်မှာ မလွှဲသာလို့ ထားတဲ့ ခုနှစ်ရက် ထားမယ်ဆိုတဲ့ အသုဘတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ (မှန်လှပါ)။
ဒီ အသုဘကြီးထဲက ဘာတွေ ထွက်လာသတုံးလို့ မေးတဲ့အခါ နားထဲက ထွက်လာလည်း သုဘ ထွက်မလား၊ အသုဘထွက်မလား .. (အသုဘထွက်မှာပါဘုရား)။
ပါးစပ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်း သုဘလား၊ အသုဘလား … (အသုဘပါဘုရား)၊ နဂိုက ဘာမို့ ဘာထွက်လာတာတုံး … (အသုဘမို့ အသုဘထွက်လာတာပါဘုရား)။
အင်း ဒီမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဒါဘာသစ္စာပါလိမ့်၊ (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ သူက ဘာထွက်လာ လာ ဘာသစ္စာဆိုမတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ဟော ဒကာကြွယ် နေရာကျပြီ … (ကျပါတယ်ဘုရား)။
အသုဘကြီးထဲက ဘာ ကျင်ကြီးထွက်လာ၊ ကျင်ငယ်ထွက်လာ၊ ချွေးထွက်လာလိုက်၊ ပြည်တွေ ထွက်လာလိုက်၊ အသုဘက အသုဘက ထွက်လာတာပဲ … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရှင်းကြလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
ဒီမှာလည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက လှုပ်လိုင်လည်း အသုဘပဲ၊ ထိုင်နေတော့ကော … (အသုဘပါဘုရား)၊ ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာ သေချာပလား … (သေချပါပြီဘုရား)။
အင်း ပြောတဲ့စိတ်ကလေးကကော … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။ အင်း ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကကော … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ ကြံနေတဲ့စိတ်ကလေးကကော … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
သြော် ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီခန္ဓာကြီးဟာ ယခု ဘယ်ကာလမှာပေါ်တုံး … (ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ပေါ်ပါတယ်ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ဒကာကြွယ် မှတ်လိုက်စမ်း၊ ပေါ်စိတ်ကလေးတွေပေါ် မြင်စိတ်ပေါ်ပေါ်၊ ကြားစိတ်ပေါ်ပေါ်၊ ကြံစိတ်ပေါ်ပေါ်၊ တွေးစိတ်ပေါ်ပေါ်၊ ဘာသစ္စာတုံး … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)။
ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)၊ ဒါဖြင့် တပည့်တော်တို့ ဒုက္ခသစ္စာ မသိသေးဘူးဘုရားလို့ ဆိုကြ မလား၊ ပေါ်ရာ ဒုက္ခသစ္စာလို့ သိပါပြီလို့ ဆိုကြမလား … (ပေါ်ရာ ဒုက္ခသစ္စာလို့ သိပါပြီဘုရား)။
ဒီ အသိလေးကို အင်မတန် အရေးတကြီး ပြောနေရတယ် (မှန်လှပါဘုရား) ဒီအသိလေးကို အင်မတန် အရေးတကြီးပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဒကာ ဒကာမတွေ ဒီအသိနဲ့ သေရင် အပါယ်မကျဘူးဆို တာလေးတစ်လုံးကို လက်ကိုင်ထားရမယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ရောက်သည်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်း သောတာပန် တည်မယ်ဆိုတာလည်း အမှန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ … (မှန်လှပါ) ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
ဒါကြောင့် ဒီသိလေးကို ဒကာကြွယ် ဖိဟောနေရတယ် (မှန်လှပါဘုရား) အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ ပျင်းကြပလား … (မပျင်းပါဘုရား)။
မပျင်းနဲ့ ဒီအသိရပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့် သေချင်းဆိုး မရှိတော့ဘူး … (မှန်လှပါဘုရား) ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဟာသည် ၀ိပါက၀ဋ် (မှန်လှပါ)၊ ပစ္စုပ္ပန်အကျိုး … (မှန်လှပါ) သဘောကျပလား … (ကျပါတယ်ဘုရား)။
ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာ ယခု … (မှန်ပါ့) အကျိုးဆိုတာ ၀ိပါက် (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဒါဖြင့် ၀ိပါက၀ဋ်ဆိုတာ သဘောကျပလား … (ကျပါတယ်ဘုရား)။
ဒါ ၀ိပါက၀ဋ် ဒီထဲက ဘာပေါ်ပေါ် ၀ိပါက၀ဋ် (မှန်လှပါဘုရား) ဒါဖြင့် ဒီထဲ ဒကာ ဒကာမတွေ ၀ဋ်ကျွတ်သလားတဲ့ ၀ဋ်နဲ့အတူတူနေရတုန်းပဲလား … (၀ဋ်နဲ့ အတူတူ နေရတုန်းပါဘုရား)။
အဲ ၀ဋ်နဲ့အတူတူ နေရတုန်းပါပဲဆိုတဲ့ ဥစ္စာဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေက သိပြီးသားဖြစ်နေတော့ ဒီထဲမှာ ၀ိပါက ကိုယ့်အကျိုးပေးက ဒုက္ခချည့် အကျိုးပေးတာ ကိုးဆိုတာကော သိပလား … (သိပါပြီဘုရား)။
ကြားစိတ် ကလေးပေါ်လာတယ် မကြားချင်လို့ မရဘူး၊ ကြားတဲ့စိတ်တော့ ပေါ်လိုက်သေးတာပဲ … (မှန်ပါ့)၊ အင်း အကျိုးပေးကိုဗျ … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဘာသစ္စာလေးပေါ်လား … (ဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်လာပါတယ်ဘုရား) သြော် … ဟိုအိမ်က ကြော်တယ်၊ ဒီမိက နံတဲ့စိတ်ကလေးကော မပေါ်ဘူးလား … (ပေါ်ပါတယ်ဘုရား)။
အင်း မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ … (မရပါဘူးဘုရား)။ အင်း ပေါ်ပြီးတော့ လာပြန်တော့ ခိုင်သလား၊ မြဲသလား၊ ဒုက္ခရောက်သွားသလား … (ဒုက္ခရောက်သွားပါတယ်ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဘာသစ္စာ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံး ပေါ်ပျောက်ချည့်ရှိတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ပေါ်ပျောက်ဟူသ၍ ဘာသစ္စာ … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား) ဒါဖြင့် ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘာသာလျှင် အသုဘက အသုဘသာ ပြသတုံး ဒုက္ခခန္ဓာကြီးက ဒုက္ခသစ္စာပဲ ပေါ်ပြီး သကာလ ပြတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒုက္ခခန္ဓာက … (ဒုက္ခသစ္စာပြပါတယ်ဘုရား)။ ဒုက္ခသစ္စာပဲပြော … (မှန်လှပါ)၊ ဒုက္ခသစ္စာပဲ ပြတယ် … (မှန်လှပါ)၊ ရှင်းကြပလား … (ရှင်းပါတယ်ဘုရား)။
အေး … ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ ဥာဏ်ထူး ဥာဏ်မြတ်ကြီး အပါယ်တံခါးပိတ်တဲ့ ဥာဏ်ထူး ဥာဏ်မြတ်ကြီး ဒကာကြွယ်တို့ ဦးလှဘူးတို့ မောင်ဘသော်တို့ သေသေ ချာချာရတယ် … (မှန်ပါ့ဘုရား)၊ ရှင်းကြပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
အဲ ဒါဖြင့် ခန္ဓာထဲက ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း ဒုက္ခသစ္စာသိလုံးလေးက ဟောဒီနေရာကနေပြီး သိတယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
သိလုံးကလေးက ဒကာ ဒကာမတွေ အဝေးက မမြင်မှာစိုးလို့ ဒီနေရာက နေသိတယ် … (မှန်လှပါ ဘုရား)။
ဒီနေရာကနေသိတော့ အပြင်ဘက် ထွက်သေးရဲ့လား … (မထွက်တော့ပါဘူးဘုရား)၊ မဂ်တွေ ဖြစ်သောကြောင့် မဂ်သည် ဒီအကြောင်းနဲ့ ဒီအကျိုးမဆက်ရအောင် ဖြတ်လိုက်သည် … (မှန်လှပါဘုရား) ပေါ်ကြပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
ဒီ ဝေဒနာ ပစ္စယာ တဏှာလာသေးရဲ့လား … (မလာတော့ပါဘူးဘုရား) ဝေဒနာပစ္စယာ ပညာ … (မှန်ပါ့ဘုရား) မဂ်လာတယ် … (လာပါတယ်ဘုရား)။
ဝေဒနာပစ္စယာ … (ပညာပါဘုရား)၊ ပညာဆိုတော့ မဂ်က ဖြတ်ပေးလိုက်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား) ဒကာကြွယ် ပေါ်ပလား … (ပေါ်ပါပြီဘုရား)။
မဂ်က ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ တဏှာ၊ ဥပါဒါန် ကံလာနိုင်သေးရဲ့ လား … (မလာနိုင်ပါဘူးဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဘာသစ္စာတုံး … (သမုဒယသစ္စာပါဘုရား)၊ လာသေးသလား၊ မလာတော့ဘူးလား … (မလာတော့ပါဘုရား)၊ မလာတာ သမုဒယသစ္စာချုပ်တယ် … (မှန်ပါဘုရား)။
မလာရင် … (သမုဒယသစ္စာချုပ်ပါတယ်ဘုရား) သမုဒယသစ္စာ ချုပ်ပါပြီဆိုတာဖြင့် ဒကာကြွယ် သေသေချာချာပဲ ဘုရားစက်ဝိုင်း ဒေသနာတော်က ပြနေပါတယ် (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ စက်ဝိုင်းကိုလည်း အလိုရှိသလိုပဲ ခင်ဗျားတို့ ရနိုင်ပါ တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
အခုမရ နောက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ … (မှန်လှပါဘုရား) ဘာမှလည်းမပူနဲ့ ဒီဥစ္စာ ငါနေ့တိုင်း ဒီစက်ဝိုင်း ဒေသနာကို ငါ့သန္တာန် ပေါ်သ၍ ငါ့ဥာဏ်နဲ့ ဖြတ်မယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ရှင်းပလား … (ရှင်းပါပြီဘုရား)။
ကိုယ့် သန္တာန်ပေါ်တဲ့ ဒုက္ခသစ္စာကို၊ မဂ္ဂသစ္စာချည့်ပဲဥာဏ်နဲ့ အမြဲကြည့်ရင်၊ သမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့ သုံးနံပါတ် အကွက်ဟာ ဒကာ ဒကာမတို့ မပြတ်ဘူးလား ပြတ်လား … (ပြတ်ပါတယ်ဘုရား)။
သုံးနံပါတ်အကွက် ပြတယ်ဆိုကတည်းက လေး နံပါတ်လာပါ့မလား … (မလာပါဘူးဘုရား)။
ဒါဖြင့် လေးနံပါတ် ဒုက္ခချုပ်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ လေးနံပါတ် ဒုက္ခသစ္စာ မချုပ်လား … (ချုပ်ပါ တယ်ဘုရား)။
အေး ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေမှာ သစ္စာသိရင် သံသရာ ပြတ်တယ်ဆိုတော့။ ပထမ နှစ်နံပါတ်အကွက်ကို ဒကာ ဒကာမတို့ သိတဲ့ဥာဏ်လေးဟာ ဒီကနေပြီး သိလိုက်တော့ သံသရာ ရှည် သေးသလား၊ ဒီသမုဒယ သစ္စာပြတ်သလား၊ မပြတ်ဘူးလား … (ပြတ်ပါတယ်ဘုရား)။
နောက် ဒုက္ခလာသေးသလား … (မလာပါဘူးဘုရား) သြော် သစ္စာသိလို့ သိတဲ့ဥာဏ်ကလေး ဒီနေရာ ၀င်လိုက်တာနဲ့ ဦးလှဘူး ဒီဥာဏ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ သမုဒယသစ္စာ တည်းဟူသော တရားပြတ်တယ် … (ပြတ်ပါတယ်ဘုရား)။
နောက်သံသရာ အားပေးတဲ့တရားပြတ်သည် … (ပြတ်ပါတယ်ဘုရား)။
ဒါဖြင့် နောက်သံသရာဆိုတဲ့ ခန္ဓာငါးပါး၊ ဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်သေးရဲ့လား … (မပေါ်ပါဘူးဘုရား)၊ ကိုင်း ဘာကြောင့် နောက် သံသရာသည် ပြတ်ပါလိမ့် ဒကာ ဒကာမတို့ (မဂ်ပေါ်လို့ပါဘုရား)။
မဂ်ဟာ ဘာသိတာပါလိမ့် … (ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား)၊ အဲ ဒုက္ခသစ္စာကို မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ သိသောကြောင့် … (မှန်လှပါဘုရား)၊ ဒီသံသရာကြီး အကုန်ပြတ်တယ် … (မှန်လှပါဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီစက်ဝိုင်းကြီးဟာ ဒီလို လည်နိုင်သေးရဲ့လား … (မလည်နိုင်ပါဘူးဘုရား)။
သြော် …ဒါဖြင့် သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ရေးထားတဲ့အ၀ိုင်း … (မှန်လှပါဘုရား) သစ္စာသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်တဲ့ နှစ်ကနေ သုံးကူးသေးရဲကလား … (မကူးတော့ပါဘူးဘုရား)။